Ireo olo-malaza maka sary amin’ny tenany ihany
David Beckham, Justin Timberlake…raim-pianakaviana “sexy”
Mahafinaritra ny mitanisa ireo raim-pianakaviana mikarakara ny tenany no sady mahavita mikarakara ireo zanany ihany koa, na dia tsy eo aza ny vadiny.
Rehefa jerena dia tsy mety antitra mihitsy ny ankabeazan’ireo olo-malaza. Marina fa misy aloha ny fikitihina tarehy rehefa maka sary izy ireo, eo ihany koa ireo tsy menatra mihitsy manambara fa nanao fandidiana mihitsy mba ahatanora lalandava azy ireo.
Ato anatin’ireto sary entina aminao ireto dia namboarin’ilay artista teratany Néerlandais ny sarin’ireo olo-malaza fony vao niandoha na tamin’ny mbola kely mihitsy ka nampiarahiny tamin’ny sarin’izy ireo taona maromaro taty aoriana. Tsikaritra fa maro amin’izy ireo no tsy niova mihitsy, tao ihany koa ireo nitombo hatsarana aza.
1. Harisson Ford : ilay horonan-tsary « Indiana Jones » no tena nahafantarana azy tany am-piandohana. Taty aoriana dia efa maro be ireo horonan-tsary nolalaoviny ary toa tsy nampiova firy ny endriny izany.
2. Emma Stone : mbola kely izy raha nandray anjara tao anatin’ilay andiana horonan-tsary « Harry Potter ». Nihalehibe tao anatin’io izy ary nihamatotra ihany koa sady nitombo hatsarana.
3. Will Smith : ilay andian-tantara « Le prince de Bel’Air » no nampiakatra ny lazany. Efa mpamokatra horonan-tsary izy amin’izao fotoana ary tsy niova firy mihitsy raha ny endriny
4. Jennifer Aniston : isan’ireo nankafizan’ny olona ilay andian-tantara « Friends » ny anjara asa nolalaovin’i Jennifer Aniston. Taona maro aty aoriana toa tsy niova firy tamin’io endriny io akory ny endrik’ity mpilalao sarimihetsika ity.
5. Michael Jackson :mpanjakan’ny mozika « pop ». Teraka mainty fihodirana ity mpanakanto ity fa noho ny aretin-koditra nahazo azy dia nitsindrona izy ka nanova ny volon-kodiny iray manontolo ho fotsy tanteraka. Ny orony sy ny volony ihany koa namboariny ka eo anivon’ny masony sisa no tena ahafantarana azy, raha ampitahaina amin’ireo sariny fony kely.